အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီနှင့် ဓလေ့များ
အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ သည်ရှေးခတ်အီဂျစ်ပြည်မှ ဒဏ္ဍာရီ အစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်၏။ ထိုဒဏ္ဍာရီ၌ အီဂျစ်သူအီဂျစ်သားများ၏ ကမ္ဘာလောကကိုနားလည်စေရန် အီဂျစ်နတ်ဘုရားများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤဒဏ္ဍာရီများကဖော်ပြထားသည့် ယုံကြည်မှုများသည် ရှေးခေတ်အီဂျစ်ဘာသာ၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရှေးလေတ်အီဂျစ် စာပေ၊ အနုပညာများတွင် ဒဏ္ဍာရီများသည် မကြာခဏဆိုသလိုပါဝင်တတ်၍ အထူးသဖြင့် ဇာတ်လမ်းတိုများ၊ ဓမ္မတေးကဲ့သို့သော ဘာသာရေးစာများ၊ ရိုးရာဓလေ့စာများ၊ ဈာပနနှင့်သက်ဆိုင်သောကျမ်းစာများနှင့် အီဂျစ်ဘုရားကျောင်းများ၏ အလှတန်ဆာဆင်မှုများ၌ ပါဝင်လေသည်။ ဤရင်းမြစ်များ၌ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုအကြောင်းအပြည့်အစုံပါဝင်မှုရှားပါးကာ ပုံမှန်အားဖြင့် အတိုပုံစံဖြင့်သာဖော်ပြမှုများလေသည်။
စကြာဝဠာ/ကမ္ဘာလောကကို ဖန်တီးစဉ်၌ နေနတ်ဘုရား ရား ၏လှေကြီးကိုကောင်းကင်ပြင်သို့ ရေထုကြီးမှမတင်ခြင်း၊ ရေထုကြီးအား နတ်ဘုရားအားလုံး၏အချုပ် နန်း(Nun) နတ်ဘုရားအဖြစ် သရုပ်ဖော်ထားခြင်း။
သဘာဝဖြစ်စဉ်သံသရာများ၏ စေ့ဆော်မှုများကြောင့် အီဂျစ်တို့သည် မျက်မှောက်ကာလအချိန်ကို ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပျက်သောပုံစံများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ မျက်မှောက်အဖြစ်အပျက်များသည် ဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ပျက်များ၏ ထပ်ကျော့ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပြီး ဤသို့ဖြစ်ပျက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပစ္စက္ခဖြစ်ပျက်မှုများသည် မား (maat) ဟုခေါ်သည့် စကြာဝဠာ၏ အစီစဉ်တကျရှိမှုကို အသစ်တဖန်ပြန်ဖြစ်စေသည်။ ဒဏ္ဍာရီဆန်သောအတိတ်မှ အရေးကြီးဆုံးဇာတ်လမ်းအပိုင်းများ၌ပါရှိသည်မှာ အီဂျစ်တို့၏ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီဖြစ်၍ ကမ္ဘာဦးကစဉ့်ကလျှားအနေအထားမှ စကြာဝဠာကို နတ်ဘုရားများတည်ဆောက်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက် နေနတ်ဘုရား ရား (Ra) ၏ကမ္ဘာမြေလောကအပေါ် အုပ်စိုးမှုဇာတ်လမ်းများ၊ အိုးဆိုက်ရစ် (Osiris) ဒဏ္ဍာရီ၊ ဤဒဏ္ဍာရီတွင် နတ်ဘုရားများဖြစ်ကြသော အိုးဆိုက်ရစ်၊ အိုက်စစ် (Isis)၊၊ ဟိုးရပ်စ် (Horus) [မှတ်စု ၁] တို့သည် အဖျက်အမှောက်လုပ်သော ဆက် (Set) နတ်ဘုရားအားပြန်လည် ရုန်းကန်ချေဖျက်မှုများပါဝင်သည်။ ဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ယူဆနိုင်သော ပစ္စုပ္ပန်မှအဖြစ်များတွင် နတ်ဘုရား ရား ၏ နေ့စဉ် ကမ္ဘာနှင့် ၎င်း၏နောက်လောကတစ်ခုဖြစ်သော ဝိဉာဉ်လောက(ငရဲ) (Duat)ကိုဖြတ်သန်းသည့်ခရီးစဉ်များပါဝင်သည်။ ဤဒဏ္ဍာရီများ၌ အဖန်တလဲလဲဖြစ်ပျက်သော အကြောင်းအရာများတွင် မား ကိုထိန်းသိမ်းသူများနှင့် ကစဉ့်ကလျှားဖြစ်စေရန်ပြုသောမိစ္ဆာအားများကြားက ပဋိပက္ခများ၊ မား ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင် ဖားရိုးများ (pharaoh - ဖဲရိုး) ၏ အရေးပါပုံ၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေသော သေခြင်းတရား၊ နတ်ဘုရားများပြန်လည်ပေါက်ဖွားခြင်း စသဖြင့်ပါဝင်လေသည်။
ဤဘာသာရေးဆန်သည့်အဖြစ်ပျက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြမှုများသည် ကျမ်းစာတစ်ခုနှင့် တစ်ခုမတူ အလွန်ကွဲပြားကြ၏။ ရံခါ၌ အချင်းချင်း ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားတွင်ပင် ရှိတတ်၏။ နတ်ဘုရားများ၏ အနှစ်ချုပ်သဘောနှင့် အပြုအမူများကို လူသားတို့နားလည်နိုင်သော ဝေါဟာရများဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုကြလျှက် အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီများသည် မူလအနေဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားချက်များသာဖြစ်ကြ၏။ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု၏ မူကွဲတစ်ခုစီသည် အီဂျစ်တို့၏ နတ်ဘုရားများ၊ ကမ္ဘာလောကကိုနားလည်မှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးတစ်ရပ်ကို မြင့်မားစေ၍ မတူကွဲပြားသော အမှတ်သညာရှုထောင့်အသွင်အပြင်တစ်ခုကိုလည်း ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
ဤဒဏ္ဍာရီသည် အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုကို နက်နက်နဲနဲလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း၊ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများကို စေ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခြင်း၏ အတွေးအမြင်အခြေခံသဘောတရားများကိုလည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီလာ ဇာတ်ကွက်၊ ပုံဖော်မှုတို့သည် အုတ်ဂူများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ အဆောင်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ၌ ပါဝင်လေ့ရှိခဲ့သည်။ စာပေ၌လည်း ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာအခြင်းအရာများကို ဟာသမှသည် ခိုင်းနှိုင်းပုံဆောင်ရေးဖွဲ့ခြင်းအထိ များပြားသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များတွင် အသုံးပြုကြကာ အီဂျစ်လူမျိုးများက မြောက်များစွာသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဒဏ္ဍာရီကို သင့်တင့်သလိုပြုပြင်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်ဟုလည်းညွှန်းဆိုဖော်ပြကြသည်။
၁ အဓိက ဒဏ္ဍာရီများ
၁.၂ နေနတ်ဘုရား၏ စိုးစံအုပ်ချုပ်မှု
၁.၃ အိုးဆိုက်ရစ် ဒဏ္ဍာရီ
၁.၄ တော်ဝင်ရင်သွေး မွေးဖွားခြင်း
၁.၅ နေ၏ ခရီးစဉ်
၁.၆ စကြဝဠာ၏ အဆုံးသတ်
အောက်၌အရေးပါဆုံးဖြစ်သော ဒဏ္ဍာရီကဏ္ဍများကို ဖော်ပြထားသည်။ အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်၍ အပိုင်းအစ(အပိုင်းတိုများ) အနေအထားများကြောင့် ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ ရှေ့နောက်သဘောကို ညွှန်ပြရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်လည်း အောက်ပါကဏ္ဍများကို လျော့တိလျော့ရဲပုံစံဖြင့်သာ ရှေ့နောက်အစဉ်ပြသမှုအား ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာလောကကိုဖန်တီးခြင်းအကြောင်းသည် အရေးကြီးဆုံးသော ဒဏ္ဍာရီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လောကကိုဖန်တီးသည့် နတ်ဘုရားများအကြောင်းသည် များစွာကွဲပြားလျက် ရှိ၏။ ကွဲပြားမှုမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အီဂျစ်မြို့များနှင့် ဘာသာရေးဆရာ(နတ်ဆရာ)တို့၏ ဆန္ဒများသည် ၎င်းတို့ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရားများကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ ထိုဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီများ၌ ပါဝင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားမှုအကြောင်းများကို ဝိရောဓိအနေဖြင့် မသတ်မှတ်သော်လည်း အီဂျစ်တို့က ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းများတွင် များစွာသောအသွင်ပြင်၊ တန်ခိုးစွမ်းအားပေါင်းများစွာပါဝင်သည်ဟုရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။
နတ်ဘုရားမများ လောကအစရှိ ကမ္ဘာမြေနံဘေးက ရေများအားခပ်ထုတ်နေစဉ် နေသည် အဝိုင်းသဏ္ဌာန်ရှိ ဖန်တီးထားသည့် ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေပေါ်မှ ပေါ်ထွက်လာသည်။
အဓိကတူညီသော ဒဏ္ဍာရီအခြင်းအရာတစ်ခုမှာ ရေထုများဖုံးလွှမ်းနေသော စကြာဝဠာအစဦး(chaos) မှ ကမ္ဘာလောကပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဤဖြစ်ရပ်သည် မား (maat) အားတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သက်ရှိတို့၏ဇာစ်မြစ်စတင်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ အပိုင်းတိုတစ်ခု၌ နတ်ဘုရားရှစ်ပါး (ရှစ်ပါးစုနတ်များ) သည် လောကအစရေထု၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များက နေ ကိုထွက်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။ နေ၏မွေးဖွားလာခြင်းသည် အာကာသကိုအလင်းဆောင်၍ ရေညိုရေညစ်များ (dark water - မကောင်းသည့်အစွမ်းရှိသော ရေ)ကို ခန်းခြောက်သွားစေသည်။ နေသည် ခြောက်သွေ့သောကုန်းမြေက ပထမဆုံးတောင်ပူစာ (တောင်)တစ်ခုမှ ထွက်လာသည်။ နိုင်းမြစ်ရေကြီးရေလျှံမှုကင်းစင်လျော့နည်းလာသောအခါ ခြောက်သွေ့သော ဂမူ၊ တောင်ပူစာများကို တွေ့မြင်ရခြင်းမှ စေ့ဆော်နိုင်သော အခြင်းအရာများမှ ဤဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီ၏ တန်ဆာဆင်ဖော်ပြမှုဖြစ်မည်။ စကြာဝဠာကိုတည်ငြိမ်စေသူ နေမင်းပေါ်ထွက်လာမှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာ၌ ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်သူလည်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဘီစီမတိုင်ခင် နှစ်တစ်ထောင်မှ ဤအကြောင်းအရာများသည် ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရားက အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော ကမ္ဘာမြေကြီးကို ခြိမ်းချောက်သည့် လောကအစ ကစဉ့်ကလျားဒြပ်မဲ့စွမ်းအားများ (forces of chaos)များကို ချိုးနှိမ်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသားပေးဖော်ပြထားကြ၏။
​အားတာမ် (Atum) (ယာတားမွတ်ဝ် ဟုလည်းအသံထွက်သည်) နတ်ဘုရားသည် နေ၊ ကမ္ဘာဦးနှင့် နီးကပ်ဆက်နွယ်၍ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီ၏ အဓိကအာရုံစိုက်စရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အခြေခံအခြင်းအရာများကို စုစည်းပေါင်းစပ်သူလည်းဖြစ်သည့် ဤအားတာမ်နတ်ဘုရားသည် ရေထုကြီးအတွင်း ထွက်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသော သူတစ်ဦးအဖြစ် မူလက တည်ရှိနေသည်။ စကြာဝဠာကြီးအားဖန်းတီးချိန်တွင် ထိုနတ်ဘုရား​ပေါ်ထွက်လာပြီး အခြားနတ်ဘုရားများကို မွေးဖွား(ဖန်တီး)သည်။ စုစုပေါင်း ကိုးပါးဖြစ်၏။ ကိုးပါးစုနတ်ဘုရားများ ဟုတွင်ကာ နတ်ဘုရားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤဖန်တီးခြင်းသဘောတွင် အားတာမ်နတ်ဘုရား၏ တစ်ကိုယ်တည်းသောဖြစ်တည်ခြင်းမှ ကမ္ဘာတွင်တည်ရှိသော အခြေခံအခြင်းအရာများစွာ ပွားများခြင်းဟု ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနိုင်သည်။
တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ဤဖန်တီးခြင်းဖြစ်စဉ်ထဲသို့ အီဂျစ်တို့က စိတ္တဇဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအား ထည့်ကြသည်။ ခေါင်းတလားများ၌ စာသားများရေးထိုးသည့်ကာလများတွင် အီဂျစ်တို့သည် ကမ္ဘာမြေဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖော်ပြထည့်သွင်းရေးသားကြသည်။ သက်ကာ (Heka) ဟုခေါ်သော မှော်တန်ခိုးအစွမ်းသည် စွမ်းအားရှိကောင်းကင်ဘုံနယ်ပယ်မှ အခြင်းအရာများကို ဩကာသလောကမှ အခြင်းအရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးကာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်နားလည်ခြင်းကို ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရား၏ မူလအယူအဆနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသော စွမ်းအားတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဟက်ကာကို နတ်ဘုရားတစ်ပါးအဖြစ်ပုံသွင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဉာဏဖြစ်စဉ်သည် ထိုနတ်ဘုရားတစ်ပါးတည်းဖြင့်သာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည် မဟုတ်ပါ။ ဘီစီ (၁၀၇၀-၆၆၄) တတိယကြားကာလခေတ် (Third Intermediate Period) က ရေးသားထားချက်များသည် ပိုမိုရှေးကျ၍ ဤဖန်တီးခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြကာ ဖန်တီးရှင်မှာ တား(Ptah) နတ်ဘုရားဟုလည်းဖော်ပြထားသည်။ တိုင်းနိုင်ငံသစ်ခေတ် (New Kingdom) ဟုတွင်သည့် ဘီစီ (၁၅၅၀-၁၀၇၀) ခေတ်က ဓမ္မတေးများတွင် နတ်ဘုရား အေမွန် (Amon -အဲမန်/အဲမွန်) အကြောင်းဖော်ပြထားကာ အေမွန်သည် အခြားနတ်ဘုရားများနောက်က လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်သော စွမ်းအားဖြစ်၍ ဤဖန်တီးခြင်းဖြစ်စဉ်၏ အခြေခံအကျဆုံးသော ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြပါရှိသည်။
လူသားဇာစ်မြစ်သည် အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ၏ အဓိကကျသော သွင်ပြင်မဟုတ်ပါ။ အချို့သော စာများ၌ လူသားများသည် နတ်ဘုရား 'ရား-အားတာမ်' (သို့) ၎င်း၏ မလိင်အရည်အသွေး (feminine aspect) ဖြစ်သော ရားမျက်လုံး (Eye of Ra)မှ အားနည်း၍ ဝမ်းနည်းသောကဖြစ်သည့်အချိန်တွင် စီးကျလာသော မျက်ရည်မှပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူသားတို့၌ အပြစ်အနာအဆာရှိသော သဘာဝနှင့် ပရိဒေဝသောကမီးအပြည့်ရှိသော ဘဝများကို နမိတ်ဖြစ်စေသည်။ အချို့က 'ကနူးမ်နတ်ဘုရား'(Khnum)က ရွှံ့စေးမှ ပုံသွင်းကာ လူသားများကိုဖန်တီးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ခြုံငုံကြည်ရှုလျှင် ဤဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီ၏ အလေးစိုက်မှုမှာ စကြာဝဠာကမ္ဘာကြီးအတွင်းနေကြသော လူသားတို့၏ နေရာအနေအထားထက်စာလျှင် စကြာဝဠာတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးကိုသာ အလေးထားထူထောင်ခြင်းဖြစ်၏။
ဖန်တီးခြင်းပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသောဒဏ္ဍာရီကာလတွင် ရား (Ra) သည် နတ်တို့သနင်းအဖြစ်သာမက လူတို့၏ဘုရင်အရှင်အဖြစ်လည်း ကမ္ဘာမြေ၌နေထိုင်သည်။ ဤကာလသည် အီဂျစ်ရိုးရာအစဉ်လာတွင် ရွှေခေတ်ဖြစ်သည်။ 'ရား'၏ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအကြောင်း ဇာတ်လမ်းများသည် သူနှင့် အနောက်အယှက်ပေးသော စွမ်းအားများကြား ပဋိပက္ခများ အပေါ်အရေးပေးသည်။ ဤသည်မှာပင် အီဂျစ်အတွေးအမြင်စနစ်၌ အုပ်ချုပ်သူတို့၏ကဏ္ဍကို (မား -maat) "တရားမျှတ၊ ကိုယ်ကျင့်ကောင်းမွန်၊ အမှန်တရား၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်း..." အောင်ဆောင်ရွက်သူအဖြစ် ရောင်ပြန်ဟပ်စေနိုင်သည်။
ဘုရားကျောင်း စာများ၏ မူကွဲများ၌ လူသိများသော ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတွင် အချို့သောနတ်ဘုရားများသည် 'ရား'၏ အမိန့်အာဏာကိုဖီဆန်အာခံကြသည်။ ထိုအခါ အခြားနတ်ဘုရားများဖြစ်ကြသော သိုးသ် (သို့) တို့တ် (Thoth) နှင့် ဟိုးရပ်စ် တို့၏အကြံများ၊ အကူအညီများဖြင့် ၎င်းတို့ကိုချေမှုန်းသည်။[Note ၁] တစ်နေရာ၌ ၎င်း၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သော 'ရားမျက်လုံး'ထံမှ သဘောကွဲလွဲမှုကိုပါရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုမျက်လုံးသည် နတ်ဘုရားမအသွင်ဖြင့် ၎င်းနှင့် အမှီအခိုကင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထိုမျက်လုံးနတ်ဘုရားမသည် ရား ကိုဒေါသထွက်ပြီး အီဂျစ်ပြည်၏အပြင်ဘက် အန္တရာယ်များသော အရိုင်းနယ်မြေများသို့သွားခဲ့၏။ သူမ မရှိသဖြင့် ရား မှာအားနည်းလာသဖြင့် နတ်ဘုရားတစ်ပါး ( ရှူ (သို့) သို့သ် (သို့) အန်ဟာ - ကွဲပြားနေသောဖော်ပြချက်များ) ကိုစေလွှတ်၍ အတင်းသော်လည်းကောင်း တိုက်တွန်း၍သော်လည်းကောင်း ပြန်လည်ခေါ်စေသည်။ ရားမျက်လုံးသည် ဆို့သစ် ခေါ် ဆစ်ရိယပ်စ်ကြယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် သူမ၏အပြန်သည် တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် နိုင်းမြစ်ရေကြီးခြင်းနှင့်ကြုံဆုံသည်။ ဆစ်ရိယပ်စ်ကြယ်သည် နေနှင့်အတူ ထွက်ပေါ်ခြင်း (heliacal rising)မှာ နိုင်းမြစ်ရေကြီးမှု၏အစကို အရိပ်လက္ခဏာပြသ၏။ ပြန်ရောက်သော် ရား၏ ဇနီး (သို့) ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သူ၏ ဇနီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ငြိမ်းအေးမှုများ ပြန်လည်ရရှိလာ၍ ဘဝသစ်စတင်သည်။
ရားသည် အသက်ရွယ်ကြီးရင့်၍ အားပျော့လာသဖြင့် လူ့ဘုံလောကသည် ၎င်းကိုဆန့်ကျင်လာ၏။ "လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်း" ဟုခေါ်သည့် ( မိုးကောင်ကင်နွားကြီးစာအုပ်(The Book of the Heavenly Cow) ပါအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်) ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်၌ လူ့လောကမှ ပုန်ကန်ကြသောကြောင့် ရားက ၎င်းမျက်လုံးကိုလွှတ်၍ အပြစ်ပေးစေသည်။ ထိုနတ်သမီးက လူများစွာကိုသုတ်သင်၏။ သို့သော် ရားက သိသိသာသာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှာ သူမကို လူသားအားလုံးကို မသတ်ရန်ဖြစ်၏။ ဘီယာများကို သွေးနှင့်တူစေရန် အနီဆိုး၍ လယ်ကွင်းများပေါ် ပက်ဖြန်းခဲ့သည်။ ထိုနတ်ဘုရားမမှာ ဘီယာသောက် မူးရစ်ပြီးမှ သူမ၏သောင်းကျန်းမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ရားမှာ ကမ္ဘာမြေကိုအုပ်စိုးရခြင်းအားငြီးငွေ့၍ ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားပြီး ၎င်း၏ နေ့စဉ်တာဝန်ဖြစ်သော ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ဝိဉာဉ်လောကသို့ ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့သည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ လူသားများမှာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားကြကာ ၎င်းတို့သည် သူတို့ထဲက ရားနတ်ဘုရားအား မကောင်းကြံသူများကို တိုက်ခိုက်ကြ၏။ ဤအဖြစ်သည် စစ်ရေးစစ်ရာ၊ သေခြင်းတရား၊ အခြားသူတို့၏ ဖျက်ဆီးသောဆောင်ရွက်ချက်များကို လူအများ၏အစဉ်တစိုက် (မား) ပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းမှုတို့၏ မူလဇာစ်မြစ်များပင်ဖြစ်သည်။
မိုးကောင်ကင်နွားကြီးစာအုပ်တွင် လူသားမျိုးနွယ်များအား ဖျက်ဆီးခြင်းအကျိုးရလဒ်များသည် နတ်ဘုရားတို့၏တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှု၏ အဆုံးသတ်၊ဒဏ္ဍာရီအချိန်ကာလ အစဉ်တိုင်းသွားခြင်း၏ အဆုံးသတ်ကို အမှတ်အသားပြုခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ ရား၏ခရီးစဉ်စတင်ခြင်းသည်လည်း မျက်မှောက်ခေတ်၏ ထပ်ကာတလဲလဲဖြစ်ပျက်တတ်သော အချိန်ကာလ (သံသရာလည်)၏အစဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခြားသောရင်းမြစ်များတွင် ဒဏ္ဍာရီအချိန်ကာလသည် ယခုအပြောင်းအလဲပြီးနောက် ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အီဂျစ်တို့၏ဖော်ပြမှုများက ကမ္ဘာမြေအုပ်ချုပ်သူအဖြစ် နေနတ်ဘုရား၏နေရာကိုယူသော စွမ်းအားရှိအုပ်ချုပ်သူများဇာတ်လမ်းအစီစဉ်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအုပ်ချုပ်သူတစ်ပါးစီသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ စိုးစံခဲ့၏။  မည်သည့်နတ်ဘုရားကအုပ်ချုပ်၊ မည်သို့သောအစဉ်အဆက်ဖြင့် ဆိုသည်ကား ကွဲပြားသောဖော်ပြချက်များရှိ၏။ သို့ရာတွင် ရား-အားတာမ် နတ်ဘုရားကိုဆက်ခံမှုမှာ ကိုးပါးစုနတ်ဘုရားများ (ရား၏ သားသမီးများ) မှ ရှူ (Shu) နှင့် ဂက်/ဂျက် (Geb) ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းကား များစွာတူညီကြသည်။ ထိုနှစ်ဦးစလုံးသည် နေနတ်ဘုရားမှာကဲ့သို့ တော်လှန်အုံကြွမှုများကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ သို့သော် အီဂျစ်ရင်းမြစ်များ၌ အာရုံစိုက်ခံရမှုအများဆုံးတော်လှန်ပုန်ကန်မှုသည် ဂက်၏သားတော် အိုးဆိုက်ရစ် (Osiris ) နတ်ဘုရားလက်ထက်တွင်ဖြစ်သည်။
အိုးဆိုက်ရစ်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းများနှင့် ၎င်းကိုဆက်ခံခြင်းသည် အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ၌ အသေးစိတ် အချဲ့ထွင်ဆုံးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှု၌ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခြင်း၊ ကြီးထွားသန္ဓေအောင်ခြင်းဆိုင်ရာ နတ်ဘုရား အိုးဆိုက်ရစ်၏ ဒဏ္ဍာရီပထမအပိုင်းတွင် ညီအကိုတော်စပ်သူ ဆက်နတ်ဘုရား (Set) က သတ်ခဲ့၍ ၎င်း၏နေရာကို လုယူသည်။ အချို့သောမူကွဲများတွင် အိုးဆိုက်ရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်၍ အီဂျစ်ပြည်တခွင်၌ ထိုအပိုင်းအစများကို ပစ်ထားခဲ့သည်။ အိုးဆိုက်ရစ်၏ ဇနီးနှင့် မောင်နှမတော်သူ အိုက်စစ် (Isis) က ခင်ပွန်းသည်၏ အလောင်းကိုရှာဖွေ၍ တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။  သူမကို ဈာပနနတ်ဘုရားများ နက်ဖ်သီစ် နှင့် အနျူးဘစ်တို့က ကူညီကြကာ ဤသို့အိုးဆိုက်ရစ်အလောင်းကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အီဂျစ်တို့၏ ရုပ်အလောင်းမပုပ်မသိုးအောင်း ဆေးစိမ်ခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်းတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုကြ၏။ ထို့နောက် အိုက်စစ်က အိုးဆိုက်ရစ်ကို ရှင်သန်စေခဲ့၍ ၎င်းနှင့်အတူ နတ်ဘုရား ဟိုးရပ်စ်အား သန္ဓေတည်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ကလေးအရွယ် ဟိုးရပ်စ်ကို ပြုစုနေသော ပိုးဆိုက်ရစ် နှင့် အိုက်စစ်တို့၏ ရုပ်တု
ဒဏ္ဍာရီဒုတိယပိုင်းမှာ ဟိုးရပ်စ်မွေးခြင်းနှင့် ကလေးဘဝဖြစ်၏။ ချောင်ကျ၍အဝေးတစ်နေရာတွင် အိုက်စစ်က သားဖြစ်သူကို ကြီးပြင်းစေသည်။ ဆက်နတ်ဘုရားရန်မှ ဖွက်ထား၏။ဤအပိုင်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူ အိုက်စစ်က သားသမီးကို မေတ္တာထားခြင်းစံနမူနာနှင့် တန်ခိုးအစွမ်းဖြင့် ကုစားသည့် စွမ်းအားရှိသော ဆေးပညာရှင်အဖြစ် သရုပ်ဖော်ထားသည်။
တတိယအပိုင်း၌ ဟိုးရပ်စ်သည် ဆက်နှင့် အုပ်ချုပ်သူရာထူးအာဏာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရုန်းကန်မှုများသည် သီးခြားဇာတ်လမ်းများစွာကို ခြုံငုံ၍ သဘောသဘာဝအားဖြင့် ပြင်းထန်သော ပဋိပက္ခများမှသည် စုဝေးနေကြသော နတ်ဘုရားများ၏ တရားမျှတဆုံးဖြတ်မှုများအထိ နယ်ပယ်ကျယ်ပြောလှသည်။ အရေးပါသော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခု၌ ဆက်က ဟိုးရပ်စ်၏ မျက်လုံးများကို ဖောက်ထုတ်ပစ်ခဲ့ကာ နောင်ပိုင်းတွင် သို့သ်/တို့တ် နတ်ဘုရား (သို့) ဟဲသော နတ်ဘုရား၏ ကုစားပေးမှုဖြင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ဟိုးရပ်စ်၏ မျက်လုံး သည် အီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ အမှတ်လက္ခဏာပုံဖော်ကျူးမှု၌ ဘဝနှင့် သုခတရားတို့၏ ထင်ရှားသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဟိုးရပ်စ်သည် ကောင်ကင်နတ်ဘုရားဖြစ်၏။ မျက်လုံးတစ်လုံးသည် နေနှင့် တူညီ၍ အခြားတစ်လုံးသည် လနှင့်တူညီသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုသောမျက်လုံးကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုခြင်းမှာ လသည် နေထက် အလင်းအားလျော့နည်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြသခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။
စာသားများ၌ ထိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရန်ပြိုင်ပွဲအတွက် အမြင်နှစ်ရပ်ကို ဖော်ပြထားရာ တစ်ခုတွင် ထိုနတ်ဘုရားနှစ်ပါးကြား အီဂျစ်ပြည်ကို ခွဲခြမ်းခြင်းဖြစ်၍ အခြားတစ်ခုမှာ ဟိုးရပ်စ်သည် တစ်ဦးတည်သော အုပ်ချုပ်သူဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယမူ၌ အိုးဆိုက်ရစ်၏ နန်းမွေခံ ဟိုးရပ်စ်သည် ဆက်၏ လုယူအုပ်ချုပ်မှုအပြီး 'မား' ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းအမှတ်သညာဖြစ်စေသည်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူ ဟိုးရပ်စ်သည် ဖခင်အတွက် ဈာပနထုံးစံများကို သားတစ်ယောက်၊ အမွေခံသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဤသို့ဈာပနအခမ်းအနားလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် အိုးဆိုက်ရစ်သည် ဒူးယက် (ဝိဉာဉ်လောက)၌ ပြန်လည်ဘဝအသစ်ရရှိခဲ့ကာ ထိုလောက၏ အုပ်ချုပ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။ အိုးဆိုက်ရစ်သည် ယမမင်း၊ ဟိုးရပ်စ်သည် လူတို့၏မင်း၊ ထိုသူတို့ကြားက ဆက်နွယ်ချက်သည် ဘုရင်များနှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသော ၎င်းတို့၏ရှေ့မင်းများအားလုံး၏ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုဖြစ်လေသည်။ အိုးဆိုက်ရစ်သည် ဘဝပြန်လည်ရရှိခဲ့ခြင်းကို ကိုယ်စားပြု၏။ ကမ္ဘာမြေတွင် နှစ်စဉ်သီးနှံများကြီးထွားခြင်းအား ၎င်းကို ဂုဏ်ပြုကြ၍ ဝိဉာဉ်ဘုံတွင် နေ၏ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနှင့် ကမ္ဘာမှလွန်ခဲ့ပြီးသော လူသားဝိဉာဉ်များပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
ဟိုးရပ်စ်သည် ရှင်သန်နေသော မည်သည့်ဖားရိုးဘုရင်ကိုမဆို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် နတ်ဘုရားအုပ်ချုပ်မှုမျိုးနွယ်၏ အဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါ။ ၎င်းကို ပထမအနေဖြင့် နတ်ဘုရားများက ဆက်ခံကြ၍ ဒဏ္ဍာရီ၏ နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သော အီဂျစ်ဘိုးဘေးဘုရင်များခေတ် (souls of Nekhen and Pe) တစ်နည်း အီဂျစ်အင်ပါယာ မတည်ထောင်မီခေတ်နှင့်ပတ်သက်သော မှုန်ဝါးဝါးမှတ်ဉာဏ်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဝိဉာဉ်များက ဆက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တို့သည် လုံဝဒဏ္ဍာရီဆန်သောဘုရင်များမှ အီဂျစ်ပြည်၏ အရှိသမိုင်းမှဘုရင်မင်းဆက်များ၏ ချိတ်ဆက်မှုများပင်ဖြစ်ကြသည်။
အလွန်ကွဲပြားသည့် အီဂျစ်စာအချို့က တူညီသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖော်ပြထားကြသည်မှာ ဘုရင်မင်းလုပ်အုပ်ချုပ်မှု၏ အမွေခံ အစွမ်းရှိ၍ (အားလုံး၏)မူလဇာစ်မြစ်ဖြစ်လာမည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောပုံပြင်တစ်ပုဒ်၏ အစောဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းသည် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ဟန်မတူပဲ အလယ်ခေတ် အလယ်ခေတ်တိုင်းနိုင်ငံ (Middle Kingdom -ဘီစီ ၂၀၄၀-၁၆၄၀) က ဝက်စ်ကာ ပါပိုင်းရပ်စ်ရှေးဟောင်းစာများ (Westcar Papyrus)မှ နားထောင်ကောင်းသော ရိုးရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်သာဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထိုရှေးဟောင်းစာများ၌ အီဂျစ်၏ ပဉ္စမမြောက်မင်းဆက်၏ ပထမဆုံးဘုရင်သုံးပါးမွေးဖွားသည့် အကြောင်းပါရှိသည်။ ယင်း၌ ထိုဘုရင်သုံးပါမှာ 'ရား' နှင့် လူအမျိုးသမီးတို့၏ ကလေးများဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထိုတူညီသောအကြောင်းအရာကိုပင် တိုင်းနိုင်ငံသစ်ခေတ် (New Kingdom ဘီစီ ၁၅၅၀-၁၀၇၀)က ခိုင်ခန့်စွာရှိသော ဘာသာရေးကျမ်းတစ်ခုတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ဤခေတ်တွင် Hatshepsut ၊ Amenhotep III နှင့် Ramesses II ဘုရင်တို့သည် ဘုရားကျောင်းရုပ်လုံးကြွအဖြစ် ၎င်းတို့၏မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းများကို ထုထွင်းဖော်ပြခဲ့ရာ အေမွန်နတ်ဘုရားသည် ဖခင်ဖြစ်၍ မိခင်မှာ သမိုင်းဝင်မိဖုရားဟု ဆိုထားသည်။ ဤသို့နတ်ဘုရားများမှ ဘုရင်ဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုခြင်းဖြင့် ထိုဘုရင်၏ မွေးဖွားဇာတ်လမ်းအပြင် နန်းတက်ခြင်းအကြောင်း နောက်ခံဒဏ္ဍာရီကိုပါ ဤပုံပြင်ကဖော်ပြထားသည်။ ဤသို့တန်ခိုးစွမ်းအားဆက်နွယ်မှုများက ဘုရင်၏ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်မှုကို တရားဝင်ဖြစ်စေ၍ နတ်ဘုရားများနှင့် လူသားတို့ကြား ဘုရင်သည် ကြားခံဆက်သွယ်ပေးသူအဖြစ်လည်း အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
ထိုတူညီသော အကြောင်းအရာဇာတ်လမ်းများကို ထိုခေတ်သစ် ဘုရင့်နိုင်ငံခေတ်လွန်ကာလက ဘုရားကျောင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ ယခုတွေ့ရမှုများ၌ မှုန်ချယ်ထားသောအရာများတွင် နတ်ဘုရားများအကြောင်းသာဖြစ်သည်။ ဤခေတ်ရှိ ဘုရားကျောင်းအများစုမှာ ဒဏ္ဍာရီလာနတ်ဘုရားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုတော်စပ်ပုံအကြောင်းများကို အထူးပြုဖော်ပြထားကြသည်။ ဖခင်၊ မိခင် နှင့် ကလေးအကြောင်း အများစုဖြစ်သည် ဤဇာတ်လမ်းမူများ၌ သုံးတွဲပါဝင်ကာ ထိုသုံးတွဲမှ ကလေးဇာတ်လမ်းကြောင်းရာဖြစ်သည်။ ဤကလေးနတ်ဘုရားတစ်ပါးစီသည် ထီးနန်အမွေခံများဖြစ်ကာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မည့်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့လူသားဘုရင်မှသည် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော နတ်ဘုရားများဆီသို့ အာရုံစိုက်မှု အပြောင်းအလဲသည် အီဂျစ်သမိုင်း၏ နောက်ပိုင်းခေတ်များ၌ ဖားရိုးဘုရင်များ (ဖဲရိုး)၏ အနေအထားကျဆင်းလာခြင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည်။
'ရား' ၏ကောင်းကင်တစ်လျှောက် ရွေ့ရှားမှုနှင့် ဝိဉာဉ်လောကအကြောင်းများကို အီဂျစ်ရင်းမြစ်များ၌ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြမထားပေ။ သို့သော်လည်း ဈာပနဆိုင်ရာစာများဖြစ်သည့် Amduat၊ Book of Gates၊ Book of Caverns များက ဖော်ပြချက်အတို အဆင့်လိုက်ဖြင့် ညခရီးစဉ်တစ်ဝက်ကို ဆက်စပ်ပြထားသည်။ ဤခရီး၌ 'ရား'၏ သဘာဝနှင့် သက်ရှိများကို မျိုးဆက်မပြတ်စေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမှာ အဓိကဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ကိုဖြတ်သန်းရာတွင် ရားသည် အလင်းကို ကမ္ဘာမြေသို့ပို့ဆောင်ပေးသဖြင့် သက်ရှိများကို ရှင်သန်စေ၍အကျိုးပြုသည်။ မွန်းတည့်ချိန်တွင် ရားမှာ စွမ်းအားအပြည့်ရ၍ နေဝင်ခါနီးတွင် စွမ်းအားများလျော့ပါးလာသည်။ ညနေခင်း၌ ရား က အားတာမ်အသွင်ပြောင်းသည်။ အားတာမ်မှာ ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရားဖြစ်ပြီး ရှေးအကျဆုံးသူလည်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း အီဂျစ်စာများအရ နေ့တစ်နေ့အဆုံး၌ ရားသည် အခြားနတ်ဘုရားများကို ထွေးထုတ်၍ မိုးသောက်ချိန်၌ ဝါးမျိုသည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ဤနေရာ၌ ကြယ်များကို ဆိုလို၍ ညတွင်ကြယ်များလင်းကာ နေ့တွင်ကြယ်များမှာ ပျောက်သယောင်ရှိခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
နေဝင်ချိန်တွင် ရားသည် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဖြစ်သော အက်ဟတ် (akhet) မှတစ်ဆင့် အနောက်သို့ဖြတ်သန်းသည်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို ရံခါ၌ ဝိဉာဉ်လောက တံခါးဝအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။ ရံခါတွင် ကောင်းကင်နတ်ဘုရားမ နပ် (Nut) က နေနတ်ဘုရားကိုဝါးမျိုးကာ နေနတ်ဘုရား၏ ခရီးစဉ်သည် သူမကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် လှည့်လည်သောခရီးဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုကြသည်။ ဈာပနဆိုင်ရာစာများ၌ ဝိဉာဉ်လောကနှင့် နတ်ဘုရားများအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အသေးစိတ်အားဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပုံများစွာဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ပုံများမှာ ဝိဉာဉ်လောက၏ အံ့ဩစရာနှင့် နားလည်ရန်ခက်ခဲသည့် ပြယုတ်များဖြစ်ကြကာ ထိုဝိဉာဉ်လောကတွင် နတ်ဘုရားများရော သေသောသူများပါ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာမူလစွမ်းအားများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းက အသစ်တဖန်ပြန်လည်ဖြစ်စေသည်။ တစ်ကယ်တမ်းဆိုရလျှင် အီဂျစ်စာများ၌ ထိုအကြောင်းကို တိတိကျကျပြောဆိုခြင်းကို ရှောင်ရှားထား၍ ရား၏ ဝိဉာဉ်လောကသို့ အဝင်ကို ၎င်း၏သေခြင်းအဖြစ်လည်းရှုမြင်နိုင်သည်။
ရား၏ခရီးစဉ်ဖော်ပြထားမှုများတွင် အချို့သောအကြောင်းအရာများ ထပ်ခါထပ်ခါပါဝင်မှုများလည်းရှိသည်။ ၎င်းဖြတ်သန်းသောလမ်းကြောင်းတွင် အနှောင့်အယှက်များကို ကျော်လွှားမှုသည် 'မား' ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများကို သဘောထင်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုမှာ မြွေနတ်ဘုရား အဲပပ် (သို့) အားပပ် (Apep)၏ တည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားရေး အဖျက်အမှောက်များဖြစ်သည်။ အဲပပ်သည် နေနတ်ဘုရားကို ဖျက်ဆီးရန်နှင့် ဖန်တီးခြင်းများကို ကစဉ့်ကလျှားအနေအထားသို့ရောက်စေရန် ခြိမ်းခြောက်၏။ စာများစွာတွင် ရားသည် ၎င်းနှင့်အတူ ခရီးနှင်သော နတ်ဘုရားများ၏ အကူအညီဖြင့် ဤအတားအဆီးများကို ကျော်လွှားခဲ့သည်။ ဝိဉာဉ်လောက၌နေကြသော သေသူများကို ပို၍ တက်တက်ကြွကြွရှိစေရန် အလင်းပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေထားဖြင့် ၎င်းထိန်းသိမ်းနေသော 'မား' ကိုသေးသိမ်လျော့ပါစေသောသူများကို နှိပ်စက်၍ ချောက်နက်ကြီးများ၊ မီးကန်ကြီးများအထဲသို့ ပစ်ချသည်။
ခရီးစဉ်တွင် အဓိကအဖြစ်အပျက်မှာ ရားနှင့် အိုးဆိုက်ရစ်တို့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်၏။ ခေတ်သစ်ဘုရင့်နိုင်ငံခေတ်၌ အီဂျစ်တို့၏ ဘဝနှင့် အချိန်ကို ရှုမြင်ပုံ၏ ရှုပ်ထွေးလှစွာသော ပြယုတ်အဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အိုးဆိုက်ရစ်ကို ဝိဉာဉ်လောကသို့ အဆင့်နိမ့်ပို့ပေးလိုက်ခြင်းမှာ ၎င်းအုတ်ဂူအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို အဝတ်များစည်းနှောင်၍ထားသော မံမီရုပ်အလောင်းနှင့် တူသွားစေသည်။ အဆုံးဆမဲ့ ရွေ့လျှားနေသော ရားမှာ လူသေတစ်ဦး၏ ဝိဉာဉ်နှင့် တူ၍ နေ့အခါတွင်ခရီးနှင်ပြီး ညအခါ၎င်းကိုယ်ခန္ဓာရှိရာသို့ပြန်ရသည်။ ရားနှင့် အိုးဆိုက်ရစ်တို့တွေ့ရာ၌ ၎င်းတို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်သွားကြသည်။ ထိုစုံတွဲသည် အီဂျစ်တို့၏ အချိန်ကာလအပေါ် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပျက်သော ပုံစံအဖြစ် ရှုမြင်ကြပုံကို ညွှန်းဆို၏။ ထိုစုံတွဲမှ အိုးဆိုက်ရစ်ဆိုသည်မှာ တည်ငြိမ်မှုသဘောဆောင်ကာ ရားမှာ အဆက်မပြတ်သည့် သံသရာကိုဆိုလိုသည်။ ထိုနှစ်ဦးပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ရားမှာ စွမ်းအားအသစ်ဖြင့် တက်တင်ကြွကြွ ခရီးစဉ်ကို ဆက်လက်ထွက်ခွာသည်။
အီဂျစ်စာများသည် ကမ္ဘာပြိုပျက်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုအနေဖြင့် ကိုင်တွယ်ရေးသားကြသည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်များအတွက် အသေးစိတ်ဖော်ပြမထားပေ။ သို့ရာ၌ ထိုစာများသည် အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပျက်ခြင်း ရေတွက်မရသောသံသရာများအပြီးတွင် ကမ္ဘာမြေလောကသည် မုချအဆုံးသတ်မည်ဆိုသည့် စိတ်ကူးကို သွယ်ဝိုက်စွာဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းတလားစာသားများ (Coffin Texts) မှ စာပိုဒ်တစ်ခုတွင် ညကမ္ဘာ၏အဆုံးသတ်ကို ဖော်ပြထား၍ သေသောသူများအကြောင်းစာအုပ် (Book of the Dead) တွင် ပို၍ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါရှိရာ ထို၌ 'အားတာမ်' နတ်ဘုရားသည် တစ်ရက်၌ ဤစုစည်းမျှတနေသော ကမ္ဘာကိုဖျက်သိမ်းကာ ၎င်း၏ မူလအစ လှုပ်ရှားမှုကင်းသောဘဝအခြေအနေ လောကအစရေထုထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်ဟု ဆိုသည်။ ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရားမှလွဲ၍ အရာခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းပပျောက်မည်။ ၎င်းနှင့်အတူပူးတွဲရှင်သန်သော အိုးဆိုက်ရစ်နတ်ဘုရား ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးတရားစီရင်သည့်အလားအလာများအကြောင်းအသေးစိတ်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရားနှင့် အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားသော နတ်ဘုရားသည် အစီစဉ်ကျဟန်ချက်ညီနေသော ကမ္ဘာကိုဖြစ်စေခဲ့သည့် လောကအစရေထုအတွင်း၌ အတူတကွရှိကာ ရှေးကမ္ဘာ​ဟောင်းကဲ့သို့ ပုံစံတူဖြင့် အသစ်ကမ္ဘာကိုပေါ်ပေါက်စေရန် ဖန်တီးမည့်အလားအလာများရှိသည်။
↑ အသံများစွာထွက်သည်။ Horus is recorded in Egyptian hieroglyphs as ḥr.w "Falcon"; the pronunciation has been reconstructed as /ˈħaːruw/. Additional meanings are thought to have been "the distant one" or "one who is above, over". As the language changed over time, it appeared in Coptic varieties variously as /hoːɾ/ or /ħoːɾ/ and was adopted into ancient Greek as Ὧρος Hōros (pronounced at the time as /hɔ̂ːros/).
↑ Horus the Elder is often treated asaseparate deity from Horus, the child born to Isis.
↑ Pinch 2004, p. 57.
↑ David 2002, pp. 81, 89.
↑ Dunand & Zivie-Coche 2004, pp. 45–50.
↑ Meeks & Favard-Meeks 1996, pp. 19–21.
↑ Bickel 2004, p. 580.
↑ Allen 1988, pp. 8–11.
↑ Pinch 2004, pp. 66–68.
↑ Pinch 2004, p. 69.
↑ Meeks & Favard-Meeks 1996, pp. 22–25.
↑ Pinch 2004, p. 143.
↑ Pinch 2004, pp. 71–74.
↑ Assmann 2001, pp. 113–116.
↑ Baines 1996, pp. 364–365.
↑ Uphill 2003, pp. 17–26.
↑ Pinch 2004, pp. 76–78.
↑ Hart 1990, pp. 30–33.
↑ Pinch 2004, pp. 79–80.
↑ Assmann 2001, pp. 131–134.
↑ Hart 1990, pp. 36–38.
↑ Kaper 2001, pp. 480–482.
↑ Assmann 2001, pp. 129, 141–145.
↑ Pinch 2004, p. 85.
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ Assmann 2001, pp. 116–119.
↑ Feucht 2001, p. 193.
↑ Baines 1996, p. 364.
↑ Hornung 1992, p. 96.
↑ Tobin 1989, pp. 48–49.
↑ Pinch 2004, pp. 91–92.
↑ Hornung 1992, pp. 96–97, 113.
↑ Tobin 1989, pp. 49, 136–138.
↑ Pinch 2004, pp. 183–184.
↑ Hart 1990, pp. 52–54.
↑ Quirke 2001, pp. 45–46.
↑ Hornung 1992, pp. 95, 99–101.
↑ Assmann 2001, pp. 77–80.
↑ Hornung 1982, pp. 162–165.
↑ Dunand & Zivie-Coche 2004, pp. 67–68.
↑ Meeks & Favard-Meeks 1996, pp. 18–19.
Allen၊ James P. (1988)။ Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts။ Yale Egyptological Seminar။ ISBN 0-912532-14-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Allen၊ James P. (2003)။ "The Egyptian Concept of the World"။ in O'Connor၊ David; Quirke၊ Stephen (eds.)။ Mysterious Lands။ UCL Press။ pp. 23–30။ ISBN 1-84472-004-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Andrews၊ Carol A. R. (2001)။ "Amulets"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 1။ Oxford University Press။ pp. 75–82။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Anthes၊ Rudolf (1961)။ "Mythology in Ancient Egypt"။ in Kramer၊ Samuel Noah (ed.)။ Mythologies of the Ancient World။ Anchor Books။ pp. 16–92။ CS1 maint: ref=harv (link)
Assmann၊ Jan (2001) [German edition 1984]။ The Search for God in Ancient Egypt။ Translated by David Lorton။ Cornell University Press။ ISBN 0-8014-3786-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Baines, John (April 1991). "Egyptian Myth and Discourse: Myth, Gods, and the Early Written and Iconographic Record". Journal of Near Eastern Studies 50 (2): 81–105. doi:10.1086/373483.
Baines၊ John (1996)။ "Myth and Literature"။ in Loprieno၊ Antonio (ed.)။ Ancient Egyptian Literature: History and Forms။ Cornell University Press။ pp. 361–377။ ISBN 90-04-09925-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Bickel၊ Susanne (2004)။ "Myth and Sacred Narratives: Egypt"။ in Johnston၊ Sarah Iles (ed.)။ Religions of the Ancient World: A Guide။ The Belknap Press of Harvard University Press။ pp. 578–580။ ISBN 0-674-01517-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
David၊ Rosalie (2002)။ Religion and Magic in Ancient Egypt။ Penguin။ ISBN 0-14-026252-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Dunand၊ Françoise; Zivie-Coche၊ Christiane (2004) [French edition 1991]။ Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE။ Translated by David Lorton။ Cornell University Press။ ISBN 0-8014-8853-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Feucht၊ Erika (2001)။ "Birth"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 1။ Oxford University Press။ pp. 192–193။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Frankfurter၊ David (1995)။ "Narrating Power: The Theory and Practice of the Magical Historiola in Ritual Spells"။ in Meyer၊ Marvin; Mirecki၊ Paul (eds.)။ Ancient Magic and Ritual Power။ E. J. Brill။ pp. 457–476။ ISBN 0-8014-2550-6။ CS1 maint: ref=harv (link)
Griffiths၊ J. Gwyn (2001)။ "Isis"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 188–191။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hart၊ George (1990)။ Egyptian Myths။ University of Texas Press။ ISBN 0-292-72076-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hornung၊ Erik (1982) [German edition 1971]။ Conceptions of God in Egypt: The One and the Many။ Translated by John Baines။ Cornell University Press။ ISBN 0-8014-1223-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hornung၊ Erik (1992)။ Idea into Image: Essays on Ancient Egyptian Thought။ Translated by Elizabeth Bredeck။ Timken။ ISBN 0-943221-11-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Kaper၊ Olaf E. (2001)။ "Myths: Lunar Cycle"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 480–482။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lesko၊ Leonard H. (1991)။ "Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology"။ in Shafer၊ Byron E. (ed.)။ Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice။ Cornell University Press။ pp. 89–122။ ISBN 0-8014-2550-6။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lurker၊ Manfred (1980) [German edition 1972]။ An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Egypt။ Translated by Barbara Cummings။ Thames & Hudson။ ISBN 0-500-27253-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Meeks၊ Dimitri; Favard-Meeks၊ Christine (1996) [French edition 1993]။ Daily Life of the Egyptian Gods။ Translated by G. M. Goshgarian။ Cornell University Press။ ISBN 0-8014-8248-8။ CS1 maint: ref=harv (link)
Meltzer၊ Edmund S. (2001)။ "Horus"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 119–122။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Morenz၊ Siegfried (1973) [German edition 1960]။ Egyptian Religion။ Translated by Ann E. Keep။ Methuen။ ISBN 0-8014-8029-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
O'Connor၊ David (2003)။ "Egypt's View of 'Others'"။ in Tait၊ John (ed.)။ 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past။ UCL Press။ pp. 155–185။ ISBN 978-1-84472-007-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
O'Rourke၊ Paul F. (2001)။ "Drama"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 1။ Oxford University Press။ pp. 407–410။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Pinch၊ Geraldine (2004) [First edition 2002]။ Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt။ Oxford University Press။ ISBN 0-19-517024-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Quirke၊ Stephen (2001)။ The Cult of Ra: Sun Worship in Ancient Egypt။ Thames and Hudson။ ISBN 0-500-05107-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ritner၊ Robert Kriech (1993)။ The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice။ The Oriental Institute of the University of Chicago။ ISBN 0-918986-75-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Roth၊ Ann Macy (2001)။ "Opening of the Mouth"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 605–609။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
te Velde၊ Herman (2001)။ "Seth"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 3။ Oxford University Press။ pp. 269–271။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Tobin၊ Vincent Arieh (1989)။ Theological Principles of Egyptian Religion။ P. Lang။ ISBN 0-8204-1082-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Tobin၊ Vincent Arieh (2001)။ "Myths: An Overview"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 464–469။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Traunecker၊ Claude (2001) [French edition 1992]။ The Gods of Egypt။ Translated by David Lorton။ Cornell University Press။ ISBN 0-8014-3834-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Uphill၊ E. P. (2003)။ "The Ancient Egyptian View of World History"။ in Tait၊ John (ed.)။ 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past။ UCL Press။ pp. 15–29။ ISBN 978-1-84472-007-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Vischak၊ Deborah (2001)။ "Hathor"။ in Redford၊ Donald B. (ed.)။ The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt။ 2။ Oxford University Press။ pp. 82–85။ ISBN 978-0-19-510234-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Wilkinson၊ Richard H. (1993)။ Symbol and Magic in Egyptian Art။ Thames & Hudson။ ISBN 0-500-23663-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ&oldid=707085" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။